Tarisa pane APIs Kukura Chako Chikumbiro (Del.icio.us uye Technorati) | Martech Zone
Chishanu, April 20, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Panguva yaunoverenga izvi, zvinogona kugadziriswa… asi iwe unogona kuona kuti yangu Technorati Chinzvimbo chiri 0. Ndizvozvo nekuti Technorati API haisi kudzosa chinzvimbo sechikamu chekufona (iri kudzosa yakavharwa node ).
Naizvo, Del.icio.us' API iri kuita kumusoro. Vakagadzirisa nyaya uko pasina zvatumirwa zvaizodzoserwa rimwe zuva iwe paunokumbira tag chaiyo. Nhasi zviri kungodzosera rekodhi yekutanga mukati meiyo tag. Basa roga roga rinotumira maDaily Reads angu harina kumbotumira kana.
Ini ndaisa zvikumbiro mukati nemakambani maviri asi ini handisi kuwana chero mhinduro. Iwo ese ari maviri makambani makuru akasvika pandiri apo ini ndaida rubatsiro munguva yakapfuura uye ndinovimba vanozviita izvozvi. Zvinogona kunge zvisina kudaro nemakambani maviri aya, asi makambani mazhinji anorapa avo API sechinhu chechipiri chebasa ravo kana kunyorera.
Iko kukanganisa kunogona kuuraya bhizinesi rako munguva pfupi iri kutevera. Tiri kumhanyisa kune iyo 'semantic' webhu ... nemapulagi, majeti, rss, mapeji etsika, nezvimwewo uko maAPI anozove akakosha kupfuura iwo Mushandisi Nzvimbo pachadzo. Mune Mashup kunyorera, ndinogona kunge ndiri kubata yepakati server iyo inotaurirana neakawanda maAPIs. Kana ndiri kambani yeMashup, ini handisi kuzoita mabhizinesi asingatore yavo API zvakakomba.
IMHO, ichi chidzidzo icho Google ndakadzidza kare kare. Kana iwe ukanyatsocherechedza Google, yega yega mafomu avanounza kumusika ane maAPI akasimba anokoka wechitatu ungwaru. Kune mabhizinesi asingaverengeke uye zvinoshandiswa zvakavakirwa kubva kune izvo maAPIs futi.
Panzvimbo iyoyo kutsigira wechitatu wehungwaru, mamwe makambani anotovarwisa zvachose. Statsaholic aifanira kushandura zita rayo kubva kuAlexaholic nekuda kwekunetseka kwechiratidzo. Fungidzira kuti… mumwe munhu anovaka yakanakisa Mushandisi Interface inosimudzira iyo manhamba awakagadzira. Vakagovera iwo manhamba kune mazana ezviuru (pamwe mamirioni) evashandisi. Svika izvo zvinogona kunge zvisati zvasimbiswa dai iwe wakangoyedza kuzviita wega… uye unogumbuka nazvo.
Vhiki rino mune yedu Indianapolis Book Club, takakurukura Iyo Starfish neSpider: Simba risingamisike reMasangano Asina Mutungamiriri. Chinhu chakakosha chebhuku rino ndechekuti Spider inomiririra yepamusoro-pasi sangano. Uraya musoro uye muviri haugone kurarama. Cheka iyo Starfish uye iwe unomuka ne2 Starfish.
Google Blogsearch anga achitora chikamu chemusika kubva kuTechnorati. Ini ndinoda Technorati uye ndichiri kufunga kuti zviri nyore kwazvo kushanda nayo, asi hapana kupokana kuti Google ndiyo rori hombe mugirazi rinotarisa kumashure. Vhiki rino Google yakaburitsa yayo Ajax Kudya API… Uku ndiko kuwedzera kwekukanganisa paTechnorati kunyangwe vachizviziva kana kwete. (Inokwikwidza zvakare neYahoo! Zvikwepa.)
Ini handinzwisise kutya kwemakambani kuvhura maAPIs avo uye kuona kushanda kwakasimba uye kutsigirwa kwavo kune mamwe makambani, zvakare, kuti ienderere mberi ichienderera mberi. Kune zvakawanda zvakwakanakira… kushomeka kwemashandisi ekushandura, madhizagi mashoma, rutsigiro rudiki, mashoma bandwidth (an API kufona ishoma pane data pane peji) uye mamwe mabhizinesi anoenderana nebhizinesi rako. Ava havazi vanhu vaunoda kukwikwidza navo kana kupatsanura, ava vanhu vaunoda kukumbundira nekupa mubairo.
Kana iwe ukafananidza yako Webhu kunyorera semuti, ungangoda kufunga nezveUI yako semashizha ako uye iyo API semidzi yako. Mashizha anodikanwa uye akanaka, asi kuva nemidzi yakadzika kunochengetedza rako ramangwana bhizinesi.
Prapta: Zvese Muhupenyu zviri Pano
Sezvinobvumwa, kuchengeta kwedu kumashure-kumagumo mashandiro akanaka uye nekuvandudza iyo webhusaiti kutora pekutanga asi, usatya, vashandisi vedu veAPI ndivo zvakakosha kwatiri. Ndiri kufara kuona yako widget ichiratidza chinzvimbo zvakare, ndinofunga izvo zvinogonesa kuti gadziriso rakaitwa kuAPI yakatanga kushanda 🙂
Ndatenda, Ian! Ndinoziva imi vanhu munofunga vese vashandisi vakakosha - ini handina kumbobvira ndave neruzivo rwakasiyana neTechnorati. Kuve Chigadzirwa Maneja kune Email Service Provider isu tinonetseka ne API yedu nenzira imwecheteyo.
Mhepo inoita kunge iri kutendeuka kunyangwe! Kambani yangu iri pakupedzisira kuziva kukosha kweAPI kubva kubhenefiti ye ROI. Imi vanhu rambai muchisundira kunze mikana mitsva yakabatanidzwa - uye isu ticharamba tichisimudzira basa renyu!